अण्डा नल्याएको भन्दै श्रीमती पोइल गइन ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अण्डा नल्याएको भन्दै श्रीमती पोइल गइन !
अण्डा नल्याएको भन्दै श्रीमती पोइल गइन !
यो दुनियामा विचित्र घटना खोज्न टाढा जानु पर्दैन, छिमेकमै भइरहन्छन् विचित्रका काण्डहरु। हालै छिमेकी मुलुक भारतको उत्तरप्रदेशस्थित गोरखपुर जिल्लामा एउटा यस्तै विचित्रको घटना भएको छ।
वाहित महिलाहरु परपुरुषसँग पोइल जाने घटनाहरु यदाकदा सुनिन्छन्। आफ्नो लोग्नेलाई छाडेर अर्को पुरुषसँग पोइल जाने कुरा वास्तवमा कुनै सामान्य कुरा होइन। पोइल जानुका कुनै खास खास हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ एउटा अण्डासमेत पोइल जानुको कारण बन्दो रहेछ।
हो, लोग्नेले अण्डा नल्याइदिएको निहुँमा एकजना महिला पोइल गएकी छिन्। गोरखपुरको क्याम्पियरगञ्ज गाउँमा बस्ने ती महिला ४ महिना पहिले पनि प्रेमीसँग भागेर केही दिनपछि घर फर्किएकी थिइन् । तर यो पाला चाहीँ अण्डाको निहुँमा उनले लोग्नेलाई छाडेर प्रेमीसँग पोइल गएरै छाडिन्।
गत शनिवार पनि अण्डाकै विषयमा उनको लोग्नेसँग झगडा पर्यो र घरबाट निस्किन्। उनका प्रेमी पनि आफ्नो घरमा नभएका कारण उनी प्रेमीसँगै पोइल गएको अनुमान गरिएको छ।
आफ्नो यहीँ कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पत्नीको प्रेमी बेला बेलामा अण्डा लिएर आफ्नो घरमा आउने गरेको पनि उनी बताउँछन्। -एजेन्सीको सहयोगमा